Tufts University - Study muna USA. Education BRO Magazine
guta : Medford
inotangwa : 1852
Musakanganwa kuti kurukura Tufts University
Kunyoresa pa Tufts University
Tufts University ndiyo yunivhesiti voga kuti rakaumbwa 1852.
Muripo mazai ari Tufts Universityare $50,000 (Aprox.).
Tufts University iri muna Medford / Somerville nharaunda Massachusetts, kwete kure Downtown Boston. Tufts ane zvimwe pazvikoro muBoston raMwari Chinatown nharaunda, apo kwayo utano sayenzi chirongwa iri, uye weChicago Grafton, kumusha Cummings School of Veterinary Medicine. freshmen All uye sophomores vanosungirwa kugara kembasi mu dorms, Inn kana dzimba yunivhesiti-nazvo kana nemafurati. Mamwe mapoka mudzidzi muri Cycling Club; ari Beelzebubs, ane varume vose cappella boka; uye Freethought Society. About hafu muviri mudzidzi vanotora chikamu kudzidza kunze zvirongwa, uye anenge 15 muzana vadzidzi vemumapato upenyu Greek. Tufts 'pamutemo Mascot, Jumbo ari nzou, ndiye chete chikoro Mascot akanyorwa raWebster Dictionary.
Tufts Kunoumbwa pamusoro School of Arts uye Sciences; Chikoro pakati Engineering, iyo inoshanda zvose Rokutenderwa uye akapedza kudzidza vadzidzi; uye vanoverengeka akapedza kudzidza uye nyanzvi zvikoro. Paakataura ayo mapurogiramu akapedza kudzidza ndizvo zvikuru rakava School of Medicine uye Cummings School of Veterinary Medicine. The School of Dental Medicine uye Fletcher Choushumiri dzenyika vamwe chinozikamwa akapedza kudzidza zvikoro. Tufts 'zvachose iwe muunganidzwa inoratidza mabasa kubudikidza Pablo Picasso, Andy Warhol uye John Singer Sargent. Chinozikamwa alumni vanosanganisira eBay muvambi Pierre Omidyar, Golden Globe-richakunda mutambi Peter Gallagher uye Guster guitarist uye vocalist Adam Gardner. Vose Gallagher uye Gardner vaiimba Beelzebubs.
School of Arts uye Sciences
Munguva 1840s, ari Universalist chechi aida kuvhura imwe kukoreji New England, uye 1852, Charles Tufts yezvipo 20 maeka kuchechi kuvabatsira kubudirira pazvinangwa izvi. Charles Tufts akanga nhaka nyika, yakaoma chikomo chakanga mumwe soro pfungwa munharaunda Boston, akadana Walnut Hill, uye kana akabvunza nenhengo yemhuri zvaaironga kuita nyika, akati “Ndichaisa chiedza pamusoro payo.” 20-eka wake mupiro (ipapo aikoshesa pa $20,000) ichiri pamwoyo Tufts’ ikozvino 150 eka kembasi, straddlingSomerville uye Medford. Yakanga muna 1852 kuti Commonwealth pamusoro Massachusetts Chartered Tufts College, tikacherechedza koreji inofanira kukurudzira “kunaka uye uMwari uye nekudzidza kudaro mitauro uye akarurama uye anobatsira hwemashiripiti sezvo anofanira kurumbidzwa.” Paaiva gavhuna, Ballou akapedza gore vaifamba uye kudzidza United Kingdom. Nzira kurairirwa raakanga atanga vakanga inobva Tutorials kuti yaiitwa muna University of Oxford uye University of Edinburgh. Now kupfuura 160 zera, Tufts ndiye yechitatu mukuru kukoreji munharaunda Boston.
Ndichivimba rimwe guru zvinofurira zviri pokugadzwa College, Hosea Ballou II akava mutungamiri wokutanga 1853, uye College Hall, chivakwa wokutanga ritenderane, rakapera rakatevera gore. Kuti chivakwa zvino ine zita Ballou raMwari. The kembasi yakavhurwa August 1854. President Ballou akafa 1861 uye anotsiviwa Alonzo Ames Miner. Kunyange zvazvo asiri munhu pakoreji akapedza kudzidza, utungamiriri hwake aizivikanwa mberi akawanda. Izvi zvinosanganisira pokugadzwa regadziriro zvikoro Tufts anosanganisira Goddard Seminary, Westbrook Seminary, uye Dean Academy. Munguva Civil War yekoreji nokushingaira vakatsigira Union chikonzero. The neimba yose Major George L. Stearns chakange chimire chikamu ritenderane raiva chiteshi riri Pachivande Railroad. Kuwedzera kuva mapoka kupfuura vanobuda, 63 Vakapedza akashanda Union mauto. Muswere chirongwa-gore matatu zvoita kuti dhigirii mapurani yokutanga yakatangwa 1865, chete with gore rakaumbwa. By 1869, ari Crane Theological School rakarongwa.
mutsivi Miner raMwari, Elmer Capen aiva purezidhendi wokutanga kuva Tufts alumnus. Panguva yake, mumwe dzokutanga innovators akanga Amos Dolbear. mu 1875, sezvo cheya of wefizikisi dhipatimendi, akagadza mumwe kushanda runhare iyo kwakabatana yezvirwere wake Ballou Hall kumba kwake musi Vanapurofesa Row. Makore maviri gare gare Alexander Graham Bell vachawana bvumidzwa. basa Dolbear kwaiita Tufts yakazopiwa zvakaramba Marconi uye Tesla. Dzimwe nyanzvi yakakurumbira inosanganisira William Leslie Hooper uyo Kuwedzera pakushumira sezvo kuita mutungamiri, akagadzirirwa wokutanga slotted armature kuti Dynamos. mudzidzi wake ari kukoreji, Frederick Stark Pearson vaizova mumwe mapiyona America kwakaita magetsi simba indasitiri. Akava nebasa kukura Magetsi uye yemagetsi mumugwagwa motokari nehurongwa izvo maguta akawanda muSouth America uye Europe akashandisa. Chimwe chikuru hakusi Stephen M. Babcock uyo akakurukura wokutanga inoshanda bvunzo kuti huwandu butterfat mumukaka. Sezvo kukura kwayo muna kukoreji, ari Babcock Test haina kumbodzika chakagadziridzwa. Kuwedzera pamusoro kemisitiri uye zvipenyu madhipatimendi vakanga zvikuru kutungamirira nenyanzvi Arthur Michael, mumwe yokutanga Organic mishonga iri U.S., uye John Sterling Kingsley akanga mumwe nyanzvi okufananidza anatomi rokutanga.
P. T. Barnum aiva mumwe tanga vabatsiri kuti Tufts College, uye Barnum Museum of Natural History (Barnum Hall) yakavakwa muna 1884 pamwe mari yezvipo naye neimba muunganidzwa wake specimens mhuka uye stuffed nedebwe ose Jumbo nzou, aizova yunivhesiti yacho Mascot. Chivako akamira kusvikira April 14, 1975, kana moto gutted Barnum Hall, kuparadza yose muunganidzwa.
On July 15, 1892, ari Tufts Board wematirastii akavhotera “kuti College achasvinudzwa kumadzimai Rokutenderwa mumadhipatimendi pamusoro chete mashoko uye mamiriro sevanhu.” Metcalf Hall yakavhurwa 1893 uye sehofisi dhomitari vakadzi. Pamusangano chete, matirastii akavhotera kusika kudzidza chikoro fakaroti uye kupa Ph.D. dhigirii biology uye kemisitiri. mu 1893 kuti Medical School yakazaruka uye 1899 yeBoston Dental College akanga revatema kupinda yunivhesiti. mu 1890, weDhipatimendi Electrical Engineering akasikwa, uye 1892 – 1893 nzira chirongwa-gore vatatu mapurani yakapiwa makore mana. With veMubatanidzwa chirongwa kwemakore mana madhigirii makapiwa vaiva tsvimborume dzevagari kana magetsi ouinjiniya. Tufts College akawedzera weDhipatimendi Mechanical Engineering uye weDhipatimendi Chemical Engineering mu 1894 uye 1898, zvichienderana zvakadaro. mu 1898, matirastii rakavhotera pamutemo vatange Rokutenderwa College of Engineering.
The Jackson College kuti Women yakatangwa 1910 somunhu batanidza kukoreji yakabatana Tufts ritenderane. mu 1980 zvakanzi revatema pamwe College of Liberal Arts asi chichiri kuzivikanwa pamutemo zita Rokutenderwa hwemashiripiti uye sayenzi kupesana, ari “College of Liberal Arts uye Jackson College.” Vakadzi Rokutenderwa mune unyanzvi uye sayenzi akaramba kugamuchira zvitupa zvavo kubva Jackson College kusvikira 2002.
Tufts rakatsaurirwa muna 1933 pamwe Panovhurwa Fletcher School muMutemo uye Nezvibvumirano, chikoro rokutanga kudzidza dzenyika muUnited States. The Fletcher School akatanga ari pamwe nesimba pakati Tufts uye Harvard University, mari ne ane chipo kubva venguva refu Tufts kumupi uye alumnus Dr. Austin Barclay Fletcher. Tufts vaifungidzira Hurumende azere Fletcher School iri 1935, uye linkages simba pakati pazvikoro zviviri kuramba.
Munguva yeHondo Yenyika II, Tufts College aiva mumwe 131 mumakoreji uye mumayunivhesiti munyika kuti akatora mugove V-12 Navy College Training Program izvo akapa vadzidzi nzira kuna Navy komisheni.
Nokuda kurambidzwa kufamba zvavakatemerwa neHondo Yenyika II, yeBoston Red sox vakaperekedza yechirimo rakadzidzisa 1943 Major League mwaka pa Tufts College. mu 1955, akaramba kuwedzera kwakaratidzwa nokuchinja zita rechikoro kuna Tufts University.
The yunivhesiti vakambokundikana kukura paaiva purezidhendi Jean Mayer (1976-1992). Mayer hwakagadzwa Tufts’ wemhuka, udyo, uye zvikoro anorapa achishandisa mitemo uye akava pasi Grafton uye Talloires pazvikoro, panguva iyoyowo nokusimudza yunivhesiti kubva ayo mamiriro ezvemari zvakatimirira nokuwedzera kukura Endowment pedyo chinoita kuti 15.
The College of Engineering akawedzera akapedza kudzidza wayo hweutungamiri kumavambo 1961, tenzi vake madhigirii rinowanikwa mumadhipatimendi mana. Yakawedzera Ph.D. zvirongwa mune zvokuimba ouinjiniya mu 1963, magetsi ouinjiniya mu 1964, ouinjiniya nemagadzirirwo 1981, uye mapurani mu 1985. mu 1984 CEO uye sachigaro Analogic Corporation uye NeuroLogica Corp Bernard Marshall Gordon akavamba Tufts Gordon Institute sezvo sangano iri rokudzidzisa rokutanga akasikwa kuti kusimudzira Entrepreneurship muminda ouinjiniya. mu 1991 New England Association of Schools uye Colleges abvumirwa kuti akatanga kumupa mwero Tenzi Science muna Engineering Management uye 1992 ari Gordon Institute yakava chikamu College of Engineering. mu 1999, ari College of Engineering akava School of Engineering, kana Rinotarisira akapedza okugadzira zvirongwa hwakatamisirwa kubva Graduate School of Arts uye Sciences. Sezvo chikamu chete nokubatanidzwazve weVadzidzisi Vedare of Arts uye Science akava rorusununguko Arts, Sciences, uye Engineering (AS&E).
Under President Larry Bacow, Tufts akatanga guru rati 2006 vaine chinangwa rokurera $1.2 bhiriyoni ezvidzidzo zvizere chinodiwa-bofu kubvuma ne 2011. Muna December 10, 2010 danidziro vanomutswa $1.14 bhiriyoni. Tufts akagamuchira mipiro kupfuura munhau yacho kubva 2005, kusanganisira $136 miriyoni zvinosiyiwa kuti chipo chacho pamusoro pokufa munhu anoyamura kuvimba dzakaiswa 1911 alumnus Frank C. kaviri, munhu $100 miriyoni chipo kubva eBay muvambi Pierre Omidyar kusimbisa Omidyar-Tufts zvitsva zvokukweretesa Fund, uye uwandu $40 miriyoni-ndinoiitawo zvipo zvikoro chaizvo.
mu 2008, Hines Interests uye TUDC, mumwe chikamu of University, aronga kuputsa pasi kurutivi South Station Tower. Tufts vawana mhepo kodzero kubva South Station 1990, nedzaimbova President Jean Meyer envisioning shongwe kuti aizova nzvimbo kutsvakurudza yezvokurapa. Rokutanga magadzirirwo zvakaitwa Cesar Pelli pamwe kuvakwa ikozvino rakarongwa kutanga muna 2017.
On November 30, 2010, yunivhesiti akazivisa kuti Anthony P. Monako, kare kuti Oxford, vaizova mutungamiri wayo nematatu. Monaco kuti kuvhurwa kwakaitika musi October 21, 2011.
Muna October 15, 2015, Computer Science rakapfuura International Relations sezvo kupfuura rakakura payunivhesiti, ne 466 Wapikisa majors.
On December 22, 2015, Yunivhesiti yakazivisa kuti kumhanya School of Museum of Arts Akanaka. Kwemapazi yava kuda kupera musi June 30, 2016.
On December 2015, Yunivhesiti apedza rokuvakazve Chirangaridzo Stairs. A idzva Central Energy Plant pari pasi kuvakwa uye yakaiswa kupedza muzhizha 2016. Huchatsiva chinhu zvokukwegura 60 egore chirimwa uye zvinopa itsva kunyatsoshanda boilers izvo mukuwedzera pakupa kuUniversity zvakananga magetsi, nenharo uye two chilled mvura, achabatsira University akavezwa choutsi. The University riri rokuvaka itsva sayenzi ouinjiniya yakaoma (SEC). The SEC ichange iine mamiriro unyanzvi mumarabhoritari uye kusimudzira interdisciplinary tsvakurudzo pakati neuroscience uye kwezvakatipoteredza madhipatimendi nesayenzi. Chivako chitsva vachapedzwa kubudikidza muzhizha 2017 uye vachabatana richangobva rehabilitated 574 Boston Avenue mukuwedzera mukirasi uye rabhoritari zvivako chikoro ouinjiniya.
Unoda kurukura Tufts University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Tufts University musi Map
Photos: Tufts University pamutemo Facebook
Tufts University wongororo
Join kukurukura pamusoro Tufts University.